Kuumbwa: Nhema mitambo iwe yaunogona kushandisa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Vaka: Ngano Mitambo Iwe Unogona Kutamba paLinux
Munguva yakapfuura maive nemitambo mikuru yemavhidhiyo, uye ini handisi kungoreva mitambo yechinyakare kana yeRetro senge Super Mario, Sonic, nezvimwe, nezvimwe zvakadaro. Asi kune mamwe mazita akakwenenzverwa zvikuru munguva yavo, kwavakatsvaira uye ikozvino ndichaedza kuvaita "kutsvaira" zvakare mune yako yaunofarira yekuparadzira GNU / Linux nekuda kwekusanganiswa uku kwandinozokuyeuchidza mamwe mazita ekutanga nawo. kudzikamisa nguva idzodzo ...
Uyu vhidhiyo yemitambo runyorwa yakagadzira yakanakisa ongororo panguva iyoyo, uye iwe zvechokwadi uchayeuka inopfuura imwe yemitambo iyi. Zvino, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, vanogona kuridzwa pane yako distro, kungave nemapurojekiti akabuda, emachiteshi echiteshi, uye kunyangwe nekushandiswa kwenzvimbo dzekuenderana dzakadai seWine kana emulators dzinovatendera kununurwa.
Chikumi 2000: yano ngano zano vhidhiyo mutambo kubva kuma90s iyo yakave imwe yeakanyanya kutambwa. Nebhuku nefirimu pane iri zita rezita rakaisirwa. Unogona kuedza kushandisa Waini kuimhanyisa, shandisa VM ine VirtualBox ine Windows XP yakaiswa, uye zvakare chirongwa OpenRA.
WormsIyo yakasarudzika Hondo yeWorms vhidhiyo mutambo waive zvakare wakanyanya kupindwa muropa panguva iyoyo. Kunyangwe paine akati wandei mavhezheni aunogona "kumutsidzira" uchishandisa Play PaLinux neWine. Asi iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kune anosetsa maclones akafanana Hedgewars y WorMUX.
mirairo: imwe yemazita makuru eiyo yapfuura yapfuura. Mutambo wevhidhiyo wakanakisa wawaifanira kudzora kuraira kwemauto akasarudzika munzvimbo dzakasiyana mumamishinari akasiyana. Unogona kushandisa waini kune akasiyana mavhezheni aripo, asi iwe unotoziva kuti vakaburitsa yakagadziriswazve iyo iwe uchawana pane Steam, uye neProton inogona kumhanya paLinux.
ewjim: ngano hunhu hwainge hwanyanya kunge gonye repasi riine sutu yemuchadenga yaimupa masimba makuru. Iwo mutambo wevhidhiyo wepuratifomu ane akati wandei mazinga maunofanira kukunda matambudziko anoshamisa. Unogona kuwana vhezheni 1 uye 2 (yakanakisa) yeLinux.
Hafu Hupenyu- Wechitatu munhu shooter iyo yakaunza huwandu hukuru hweMODs dzekuwedzera. Mazhinji anowanikwa mu Valve's Steam yeLinux natively. Uye zvakare, nekuuya kwezita idzva uye rinotarisirwa zita rekuti Alyx, iwe unozogona kutora mukana wekudzokera uye kugona kupfuudza kubva pakutanga kuti utevedzere iyo yakazara nyaya mutsara ...
Raira uye Kukunda: imwe yeavo vakagadzirwazve saMai Commandos. Muzuva rayo, pamwe neDune, yaive imwe yeakanakisa chaiwo-enguva zano revhidhiyo mitambo. Kune huwandu hukuru hwemazita mune ino saga, yega yega ine yayo yainofarira. Kwandiri iZuva reTiberian. Pano, zvakare une sarudzo ye OpenRA saDune, uye Waini. Zvakare, kana iwe uchirangarira, Ndakakuudza mazuva mashoma apfuura nezve chimwe chirongwa chinonakidza izvo zvinogona kuunza zvinhu zvitsva ...
Ehe izvi ingori sampuro diki. Kune akawanda kwazvo… Ndeupi mutambo waunofarira wevhidhiyo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Vaka: Ngano Mitambo Iwe Unogona Kutamba paLinux